प्रदेश अस्पतालमा किन प्रभाकारी बन्नसकेन क्यान्सर सेवा ? जहाँ दुई वर्षअघि सुरु भएको थियो - SatyaPatrika
प्रदेश अस्पतालमा किन प्रभाकारी बन्नसकेन क्यान्सर सेवा ? जहाँ दुई वर्षअघि सुरु भएको थियो
अस्पताल भन्छ, जनशक्तिले काम गरेन ! डा. दिविका भन्छिन, काम गर्ने बतावरण मिलेन !
२०७८ असार १३, आईतवार प्रकाशित
सुर्खेत – सन्दर्भ १ : असार ११ गते शुक्रबार प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा भएको एक कार्यक्रमकाबिच अस्पताल स्रोतले पत्रकारहरुलाई अब सुर्खेतमै क्यान्सर रोगको उपचार तथा शल्यक्रिया हुने जानकारी दियो । उक्त जानकारीपछि कर्णालीबाट प्रकाशित अधिकांश पत्रपत्रिका, अनलाइन र रेडियोबाट समाचार प्रकाशन प्रशारण भयो । यो समाचार लगातार असार १२ गते साँझसम्म काठमाडौंबाट संचालित धेरै जसो ठुला मिडियाबाट पनि प्रकाशन प्रशारण भएको थियो ।
सन्दर्भ २ : तर ‘अब सुर्खेतमै क्यान्सर रोगको अप्रेशन हुने’ भन्ने शिर्षकमा सोही समाचार सत्यपत्रिका डटकमले प्रकाशन गरेपछि स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक डा. रविन खड्का, स्वास्थ्यकर्मी महेन्द्र थापा लगाएतले यो समाचार सत्य नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत असन्तुष्टि जनाए । तर उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएको फेशबुक स्टाटसका कमेन्टमै धेरैले सेवा सुचारु हुनुपर्छ भन्दै समचार स्रोतलाई धन्यबाद दिएका थिए ।
यस बिषयमा समाचारप्रतिका टिकाटिप्पणि र कर्णालीमा तत्काल क्यान्सर रोगको शल्यक्रियासहितको उपचार व्यवस्थाको आवश्यकताका आधारमा सत्यपत्रिका टिमले अस्पताल स्रोतसँग निरन्तर सोधिखोजी ग¥र्यो । अन्ततः रोचकको कुरा डाक्टरहरुको आपसी मनमुटाब र आरोप प्रत्यारोप जस्ता आन्तरिक बिवादले नै समयमै क्यान्सर रोगको सेवा प्रवाहमा समस्या आएको रहेछ ।
कुरो करिब दुई वर्ष अघि प्रदेश अस्पतालमा क्यान्सर रोगको पहिचान तथा उपचार गर्न भन्दै आवश्यक औषधि उपकरण सहित प्याथोलोजीमा एमडी गरेकी डा.दिविका खड्कालाई नियुक्त गरियो । उनी डा. रविन खड्काकी धर्मपत्नि समेत हुन् । उनी नियुक्त भएको केही समयसम्म क्यान्सर रोग पहिचान सम्बन्धि काम गरेको तर पछि काम गर्ने बातावरण नमिलेको भन्दै गएको बैशाखबाट उनी कामबाट बाहिरी सकेकी छन् ।
उनी कामबाट बाहिरीएपछि अस्पतालले उनको ठाउँमा डा. सृष्टि श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्दै छिट्टै शल्यक्रियासहितको सेवा सुचारु गर्ने जनाएको छ । यस बिषयमा डा. रविन खड्का भन्छन्, ‘समाचारप्रति मेरो अरु कुनै गुनासो होइन । तर समाचारमा यसअघि जनशक्ति नभएका कारण क्यान्सर रोगको पहिचान तथा उपचार सेवा सुरु गर्न नसकिएको र कर्णालीमा पहिलो पटक सेवा सुरु हुदै भन्नेकुराप्रति मेरो आप्पती हो ।’
यसबारे उनले अस्पताल स्रोतले नै गलत जानकारी दिएको भन्दै कर्णालीमै पहिलो पटक प्थोलोजीमा एमडी गरेकी डा.दिविका खड्का रहेको दावी गरे । ‘डा. दिविका हुदाँ विभिन्न बाहानामा अस्पतालले काम गर्ने बातावरण मिलाएन । तर उहाँले काम छोडेपछि कर्णालीमै पहिलो पटक प्थोलोजीष्ट डाक्टर ल्याएर सेवा सुरु गर्दैछौं भन्नेकुरा हास्यास्पद लाग्यो’ उनले भने, ‘पहिले नै डा. दिविकालाई काम गर्ने बातावरण मिलाएको भए अहिलेसम्म सेवा प्रभावकारी भइसक्थ्यो ।’
डा. दिविकालाई काम गर्ने बातावरण नभएको र आवश्यक उपकरण समयमै खरिद नभएको वा खरिद भएको उपकरकणमा आर्थिक अनियमितता भएको जस्ता विविध प्रश्न उठिरहेका बेला सत्यपत्रिका टिमले अस्पतालका सुचना अधिकारी विकास केसीसँग बुझ्दा उनले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार उपकरण खरिद भएकाले यसमा कुनै शंका गर्न नसकिने बताए ।
साथै उनले यसअघि नै क्यान्सर रोग पहिचानका लागि आश्वयक उपकरण अस्पतालमा उपलब्ध भएपनि सेवा प्रवाहको काम नभएको जनाए । उनका अनुसार पाठेघर, स्तन, गलगाँड र मासुको टुक्रा काट्ने लगाएतका उपकरण अस्पतालमा उपलब्ध छन् ।
यता कर्णाली प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्काले क्यान्सर रोगको पहिचान, उपचारसहितको शल्यक्रिया सेवा सुरु गर्न लागेको भन्दै बिनाकारण कसैले असन्तुष्टि जनाउँदैमा सेवा प्रवाह नरोकिने दावी गरे । डा. दिविका हुदाँ सेवा प्रवाह किन नभएको हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘सेवा सुचारुका लागि डा. दिविका नियुक्त भइसकेपछि आवश्यक उपकरण पनि किन्यौं । तर उहाँले उपलब्ध सेवा उपभोग गरेपनि काममा नियमित आउनु भएन । त्यसैले हामीलाई कामसँग सम्बन्ध छ । कसैले कुरा काट्यो भन्नेपछि लाग्दैनौ । अब केहिदिनमै क्यान्सर शल्यक्रिया सहितको सेवा सुरु गछौं ।’
उनका अनुसार क्यान्सरको उपचारका लागि महँगो खर्च व्यहोरेर जिल्ला बाहिर जानपर्ने बाध्याता अब कर्णालीबासीका लागि अन्त्य हुने छ । यसअघि बिरामीहरुले उपचारका लागि नेपालगन्ज, चितवन, काठमाडौं तथा भारतसम्म जानुपर्ने बाध्यता थियो । ‘क्यान्सरका बिरामी आएमा अस्पतालले क्यान्सर भए नभएको पत्ता लगाउने छ । यहाँ अप्रेशन गर्न सकिने भए गर्ने र गर्न नसकिने भएको खण्डमा अन्यत्र रेफर गर्नेछौं’ डा. डम्बर खड्डाले भने, ‘सकेसम्म सेवा सुचारुका लागि आवश्यक कुनैपनि कुराको कमि हुन दिने छैनौं ।’
यस्तो छ डा. दिविकाको गुनासो
चुनौतीकाबिच कर्णालीमा पहिलो पटक म आएर क्यान्सर रोग पहिचानको सेवा सुरु गरे । तर महिनावारी, सुत्केरी र कोरोना माहामारी लगाएतका कारण म नियमित काममा उपस्थित हुन सकिन ।
सत्यपत्रिकासँग उनले भनिन्, ‘क्यान्सर रोग पहिचान सेवा सुचारुका लागि प्रदेश अस्पतालमा महंगा महंगा उपकरण थिए । तर उपकरण संचालनका लागि आवश्यक केमिकल र तालिम उपलब्धबारे पटक पटक अस्पताल प्रशासनसँग अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाई भएन ।
कर्मचारी राख्ने तर काम गर्ने बातावरण नभएपछि मैले काम छोड्ने निधो गरे । किनकी मलाई तलबसँग मतलब थिएन, काम सँग मतलब थियो । अस्पतालमा उपकरण थन्एिका छन् । तर कर्णालीका बिरामीहरु महंगोमा बाह्य जिल्ला उपचार गर्न जादाँ मेरो पनि चित्त दुखेको हो । फेरी मैले क्यान्सर रोग पहिचान गर्ने मात्रै हो । उपचार तथा शल्यक्रियाका लागि सम्बन्धित विशषेज्ञ चिकित्सक आवश्यक पर्छ । जो प्रदेश अस्पतालले हालसम्म व्यवस्था गरेको छैन ।’
अन्तत मेरो चित्त दुखाई र गुनासोको कुरा के हो भने मैले पहिले देखि नै जुन सेवा दिइरहेको थिए । त्यही सेवाका लागि हाल अर्को डाक्टर बोलाएर यसअघि काम भएकै थिएन र यसबिषयको डाक्टर नै थिएन भनेकोमा मलाई दुख लागेको हो । मैले सुरु गरेको सेवा थिएन भन्नु ठिक होइन । xxx